Amasu we-SEO: Ungasithola Kanjani Isikhundla Sebhizinisi Lakho Kusesho Lwezinto Eziphilayo ngo-2022? | Martech Zone
Sisebenza neklayenti manje elinebhizinisi elisha, uhlobo olusha, isizinda esisha, kanye newebhusayithi entsha ye-ecommerce embonini eqhudelana kakhulu. Uma uqonda ukuthi abathengi nezinjini zokusesha zisebenza kanjani, uyaqonda ukuthi akuyona intaba elula ukuyikhuphuka. Amabhrendi nezizinda ezinomlando omude wegunya kumagama angukhiye athile anesikhathi esilula kakhulu sokugcina ngisho nokukhulisa izinga lawo lemvelo.
Enye yezingxoxo ezibalulekile engiba nazo nezinkampani lapho ngichaza ukusebenza kahle kwezinjini zokusesha (SEO) namuhla indlela imboni eshintshe ngayo. Umgomo wayo yonke imiphumela yenjini yokusesha ukuhlinzeka ngohlu lwezinsiza ekhasini lomphumela wenjini yokusesha (serp) okuzoba kulungele umsebenzisi wenjini yokusesha.
Emashumini eminyaka adlule, ama-algorithms ayelula. Imiphumela yosesho ibisekelwe kuzixhumanisi... qongelela izixhumanisi eziningi zesizinda sakho noma ikhasi futhi ikhasi lakho libekwe kahle. Yiqiniso, ngokuhamba kwesikhathi, imboni yadlala lolu hlelo. Ezinye izinkampani ze-SEO zaze zakha isixhumanisi ngokuhlelekile amapulazi ukukhulisa ngokuzenzisa ukubonakala kwenjini yokusesha kumakhasimende abo akhokhayo.
Izinjini zokusesha bekufanele zivumelane nezimo… bezinamasayithi namakhasi abekwe ngokwezinga angenamsebenzi kumsebenzisi wenjini yokusesha. I amakhasi amahle kakhulu azizange zibekwe ezingeni, kwakuyizinkampani ezinamaphakethe ajulile noma amasu athuthuke kakhulu okubuyisela emuva. Ngamanye amazwi, ikhwalithi yemiphumela yenjini yokusesha ibilokhu yehla… ngokushesha.
Ama-algorithms enjini yokusesha aphendulile futhi uchungechunge lwezinguquko lwanyakazisa imboni esisekelweni sayo. Ngaleso sikhathi, ngangeluleka amakhasimende ami ukuthi aziyeke lezi zinhlelo. Enye inkampani eyayiphumela obala yaze yangiqasha ukuthi ngenze ucwaningo olunzulu lwama-backlink akhiqizwa ngohlelo lwayo lokuxhumana lomeluleki we-SEO. Phakathi namasonto ambalwa, ngakwazi ukuthola umkhondo xhuma amapulazi ukuthi uchwepheshe wayekhiqiza (ngokuphambene nemigomo yesevisi yenjini yokusesha) futhi ebeka isizinda engcupheni enkulu yokungcwatshwa ekusesheni, umthombo oyinhloko wethrafikhi yabo. Ama-consultants axoshwa, thina unqamule izixhumanisi, futhi sisindise inkampani ekungeneni kunoma iyiphi inkinga.
Kuyangixaka ukuthi noma iyiphi i-ejensi ye-SEO ikholelwa ukuthi ngandlela thize ihlakaniphe kakhulu kunamakhulu ososayensi bedatha nonjiniyela bekhwalithi abasebenza isikhathi esigcwele kwa-Google (noma kwezinye izinjini zokusesha). Nasi isisekelo esiyisisekelo se-algorithm yezinga le-organic ye-Google:
Ikhasi elisezingeni eliphezulu kumphumela wosesho lwe-Google libekwe lapho ngokuba insiza engcono kakhulu yomsebenzisi wenjini yokusesha, hhayi ngokudlala i-algorithm yokuxhumanisa emuva.
I-Google Ranking Factors ephezulu yango-2022
Lapho abaxhumanisi be-SEO kusukela eminyakeni edlule bebengagxila esizeni ngezici zobuchwepheshe zewebhusayithi nangaphandle kwendawo enama-backlink, ikhono lanamuhla lokulinganisa lidinga ukuqonda okuphelele komsebenzisi wenjini yakho yokusesha kanye isipiliyoni somsebenzisi ozinikezayo uma ekhetha isayithi lakho emiphumeleni yenjini yokusesha. Lokhu infographic kusuka Red Design Design yenza umsebenzi oncomekayo wokuhlanganisa i- izici eziphezulu zezinga nge Injini Yokusesha kulezi zici ezibalulekile:
Ukushicilela okuqukethwe kwekhwalithi ephezulu – Uma sisebenza ekuhloleni nasekuthuthukiseni a umtapo wokuqukethwe kubahlinzeki bethu, sisebenzela ukukhiqiza okuqukethwe okungcono kakhulu uma kuqhathaniswa namasayithi aqhudelanayo. Lokho kusho ukuthi senza ucwaningo oluningi ukuze sikhiqize ikhasi eliphelele, elakhiwe kahle elinikeza izivakashi zethu konke ezikudingayo - okuhlanganisa ukuxhumana, umbhalo, umsindo, ividiyo, nokuqukethwe okubukwayo.
Yenza isayithi lakho libe Iselula-Okokuqala - Uma umba ujule kuzibalo zakho, uzothola ukuthi abasebenzisi beselula bavame ukuba umthombo oyinhloko wethrafikhi yenjini yokusesha. Ngiphambi kwamahora edeskithophu yami ngosuku ngisebenza… kodwa ngisho ngiwumsebenzisi osebenzayo wenjini yokusesha njengoba ngisedolobheni, ngibukele uhlelo lwe-TV, noma ngihlezi nje ikhofi lami lasekuseni embhedeni.
Thuthukisa umuzwa wakho womsebenzisi - Izinkampani eziningi kakhulu zifuna a ukuvuselela yesizinda sabo ngaphandle kocwaningo olwanele lokuthi bayaludinga noma cha. Amanye amasayithi asezingeni eliphezulu anesakhiwo sekhasi esilula, izici ezijwayelekile zokuzulazula, nezakhiwo eziyisisekelo. Ukuzizwisa okuhlukile akukona ngempela ukuzizwisa okungcono… naka amathrendi edizayini kanye nezidingo zomsebenzisi wakho.
Ukwakhiwa Kwesiza - Ikhasi lewebhu eliyisisekelo namuhla linezinto eziningi kakhulu ezibonakalayo ezinjinini zokusesha kunamashumi eminyaka edlule. I-HTML ithuthukile futhi inezici eziyinhloko nesesibili, izinhlobo ze-athikili, izici zokuzulazula, njll. Nakuba ikhasi lewebhu elifile lingase libekwe kahle, ukwakheka kwesayithi kungenye yezinto ezilula kakhulu ongazisebenzisa kusayithi. Ngiyifanisa nokukhipha umata obomvu… kungani ungakwenzi?
Amavidiyo we-Core Web - Amavidiyo we-Core Web ziyisisekelo esibalulekile somhlaba wangempela, amamethrikhi agxile kumsebenzisi alinganisa izici ezibalulekile zolwazi olunzulu ngomsebenzisi wewebhusayithi. Nakuba okuqukethwe okuhle kungase kukleliswe kahle ezinjinini zokusesha, okuqukethwe okuhle okudlula okulindelekile kuwo wonke ama-metrics we-Core Web Vitals kuzoba nzima ukukhipha emiphumeleni yezinga eliphezulu.
Amawebhusayithi avikelekile - Amawebhusayithi amaningi ayasebenzisana, okusho ukuthi uthumela idatha futhi uthole okuqukethwe okuvela kuwo… njengefomu lokubhalisa elilula. Indawo evikelekile ichazwa ngokuthi I-HTTPS ukuxhumana nosendlalelo sesokhethi esivumelekile (I-SSL) isitifiketi esibonisa ukuthi yonke idatha ethunyelwe phakathi kwesivakashi sakho nesayithi ibethelwe ukuze ingakwazi ukuthwebula kalula izigebengu ze-inthanethi namanye amadivaysi okubuka inethiwekhi. A iwebhusayithi evikelekile iyadingeka namuhla, akukho okuhlukile.
Lungiselela Isivinini Sekhasi - Izinhlelo zesimanje zokuphatha okuqukethwe zingamapulatifomu asekelwe kudatha abheka phezulu, athole, futhi ethule okuqukethwe kwakho kubasebenzisi. Kukhona amathani izinto ezithinta isivinini sekhasi lakho - konke lokho kungathuthukiswa. Abasebenzisi abavakashela ikhasi lewebhu elisheshayo bavame ukungagxumi futhi baphume… ngakho izinjini zokusesha zinaka kakhulu isivinini sekhasi (I-Core Web Vitals igxila kancane ekusebenzeni kwesayithi lakho).
Ukusebenziseka Kwekhasi – Indlela ikhasi lakho elihleleke ngayo, elakhiwe, futhi elethulwa ngayo kusiseshi senjini yokusesha isiza injini yokusesha ukuthi iqonde ukuthi kuyini okuqukethwe nokuthi yimaphi amagama angukhiye okufanele akhonjwe kuwo. Lokhu kungafaka omaka bakho besihloko, izihloko, amagama agqamile, okuqukethwe okugcizelelwe, idatha ye-meta, amazwibela anothile, njll.
Metadata – I-Meta deta iwulwazi olungabonakali kumsebenzisi obonakalayo wekhasi lewebhu kodwa olwakhiwe ngendlela engasetshenziswa kalula isiseshi senjini yokusesha. Iningi lamaplathifomu okuphatha okuqukethwe kanye nezinkundla ze-ecommerce zinezinkambu zedatha ye-meta ozikhethela okufanele uzisebenzise ngokugcwele ukuze wenze kangcono okuqukethwe kwakho kukhonjwe ngendlela efanele.
I-Schema - I-Schema iyindlela yokuhlela nokwethula idatha ngaphakathi kwesayithi lakho lezo izinjini zokusesha ezingazisebenzisa kalula. Ikhasi lomkhiqizo ekhasini le-e-commerce, isibonelo, lingaba nolwazi lwentengo, izincazelo, ukubalwa kwempahla, nolunye ulwazi izinjini zokusesha ezizolubonisa ngokulungiselelwa okukhulu. amazwibela acebile emakhasini emiphumela yenjini yokusesha.
Ukuxhumeka Kwangaphakathi - Ukuhlelwa kwesizinda sakho kanye nokuzulazula kumelela ukubaluleka kokuqukethwe kusayithi lakho. Kufanele zithuthukiselwe kokubili kumsebenzisi wakho futhi zethule ezinjinini zokusesha ukuthi yimaphi amakhasi abaluleke kakhulu kokuqukethwe kwakho nolwazi lomsebenzisi.
Ama-Backlink Abalulekile futhi Agunyaziwe - Izixhumanisi zesayithi lakho ezivela kumasayithi angaphandle zisabalulekile ekubekweni phansi, kodwa kufanele zihlelwe ngokucophelela uma ufisa ukusheshisa izinga lakho. Ukufinyelela ku-Blogger, isibonelo, kungase kunikeze amasayithi afanelekile embonini yakho anezinga elihle ngokuqukethwe okufaka isixhumanisi ekhasini lakho noma isizinda. Kodwa-ke, kufanele izuzwe ngokuqukethwe okuhle kakhulu… hhayi ukuqhutshwa ngogaxekile, ukuhweba, noma izikimu zokuxhumanisa ezikhokhelwayo. Indlela enhle yokukhiqiza ama-backlink afanele kakhulu futhi agunyaziwe ngokukhiqiza okuhle Isiteshi se-YouTube esithuthukisiwe. Indlela enhle yokuzuza izixhumanisi ukukhiqiza nokwabelana nge-infographic enhle… njengoba iRed Website Design yenza ngezansi.
Ukusesha Kwendawo – Uma isayithi lakho limele isevisi yendawo, ehlanganisa izinkomba zendawo njengamakhodi endawo, amakheli, izimpawu zendawo, amagama amadolobha, njll. ukuze izinjini zokusesha zikhombe kangcono okuqukethwe kwakho kusesho lwendawo. Futhi, ibhizinisi lakho kufanele lihlanganise ne-Google Business kanye nezinye izinkomba ezithenjwayo. I-Google Business izoqinisekisa ukubonakala kumephu ehlobene (ephinde yaziwe ngokuthi yi- iphakethe lemephu), ezinye izinkomba zizoqinisekisa ukunemba kwebhizinisi lakho lendawo.
Wewu… lokho kancane. Futhi inikeza ukuqonda okuncane kokuthi kungani umxhumanisi wezobuchwepheshe bokusesha akwanele. Izinga lokusesha eliphilayo lanamuhla lidinga ibhalansi yosomaqhinga bokuqukethwe, uchwepheshe, umhlaziyi, umakethi wedijithali, uchwepheshe wezobudlelwane bomphakathi, umakhi wewebhu… nakho konke okuphakathi. Ingasaphathwa indlela ozosebenzisana ngayo nezivakashi nini ziyafika - kusukela ekuthathweni kwedatha, ukulinganisa, ukuxhumana kokumaketha, uhambo lwedijithali, njll.
Tags: ukufinyelela kwe-bloggerokubalulekile kwewebhu okuyisisekelogooglegoogle ibhizinisiizici zesimo se-googlehttpsinfographicukuxhumanisa kwangaphakathilinksizinkomba zasendaweniukusesha kwendawoImethadathamobile-kuqalaukwenziwa kwekhasisimo organicukusesha okuphilayoukufinyelelaisivinini sekhasiukwenza isivinini sekhasiizici zesigabaamazwibela acebilei-schemai-schema.iwebhusayithi ephephileseolokho infographicisakhiwo sesayithisslisipiliyoni somsebenzisi